Obama Oo Ilmadda Hoorsaday markii xasuuq ka dhacay dugsi Hoose oo ku yaala Connecticut | Somaliland.Org
Obama Oo Ilmadda Hoorsaday markii xasuuq ka dhacay dugsi Hoose oo ku yaala Connecticut
December 15, 2012	USA (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Maraykanka Brack Obama, ayaa ilmadda hoorsaday oo ka jidhiidhicooday ka dib markii wiil yar oo labaatan jir ahi uu baas ku furay dugsi hoose Sandy Hook ee gobolka Connecticut ee dalka Maraykanka oo ay ku qudh baxeen jimcihii shalay 27 qof oo ay ku jiraan 20 caruur ah oo da’doodu u dhaxaysay 5 jir illaa 10 sano jir.
Wiilka xasuuqan geystay oo 20 jir ahaa oo la odhan jiray Adam Lanza, ayaa isna is toogtay oo ku jira maydka caruurtan. Warku waxa uu intaasi ku daray in wiilkani ka hor intii aanu iman dugsigaas uu soo khaarajiyay Hooyadii oo meydkeeda laga helay iyana gurigoodii.
Madaxweyne Obama ayaa dhacdan argagaxa leh kaga dareen celiyay hadal uu ka sii daayay Telefishanka, iyadoo intii uu hadlayayna dhawr jeer sawirkiisa laga baahiyay TV-ga isagoo ilmadda hoorsanaya.
“Quluubteenu maanta way qaracan tahay, waanay qaracan yihiin waalidiintii, walaalihii caruurtii iyo qoysaskii dadkii waaweynaa ee ku dhintay falkan,”ayuu ku tiraabay Madaxweyne Obama oo wajigiisu murrugo la doorsamay.
Madaxweynuhu waxa uu dhambaalkiisaas tacsida ahaa ku yidhi “Waa inaynu si wada jir ah u qaadanaa Tallaabooyin macno leh oo aynu kaga hortagayno masiibooyinkan oo kale.”
“Dal ahaan dhacdan oo kale waxay ina soo martay marar badan sanadihii u dambeeyay,”ayuu ku muusanaabay Obama.
Madaxweynaha Maraykanku waxa uu dhambaal tacsi ah u diray qoysaskii dadkii carruurtoodu ku dhinteen falkaas iyo kuwii ka badbaadayba.
Gumaadkii shalay waxa uu u ahaa dalka maraykanka kii sadexaad ee noociisa ah ee sanadkan sii galbanaya ee 2012 ka dhaca wadankaasi.
Geesta kalena waxa hoos loo dhigay calanka wadanka Maraykanka taasi oo qeyb ka ah baroor diiqda qaran ee wadankaasi ku xusayo weerarkaasi arxan darrada ahaa.
Weerarkan waxa uu dalka maraykanka ka abuuray doodo rayul caamku ka bixinayo dambiyadda qoryaha lagu geysto oo saamayn taban oo xun ku yeelatay wadankaasi.
Previous PostGolaha Deegaanka Burco oo Doortay Maayar Iyo Ku- Xigeen Aan Lala TartaminNext PostKomishanka oo Caawa Liiska 25 Xubnood G/Deegaanka Hargeysa u gudbiyay Maxkamadda	Blog